Global Voices teny Malagasy » Ho An’ireo Mpitsoaponenana ao Seattle, Ny Fiakaran’ny Hofantrano dia Midika Fa Tsy Mifarana Ny Fitadiavana Trano · Global Voices teny Malagasy » Print
Ho An'ireo Mpitsoaponenana ao Seattle, Ny Fiakaran'ny Hofantrano dia Midika Fa Tsy Mifarana Ny Fitadiavana Trano
Voadika ny 16 Mey 2017 13:00 GMT 1	 · Mpanoratra PRI/PRX's The World Nandika Candy
Sokajy: Afrika Mainty, Amerika Avaratra, Etazonia, R.D. Kongo, Fifindràmonina, Mediam-bahoaka, Mpitsoa-ponenana, Zon'olombelona
Telo taona lasa izay i Floribert Mubalama no tonga tao Etazonia, taorian'ny nipetrahany nandritry ny valo taona tany aminà toby fametrahana mpitsoaponenana. Ao SeaTac, Washington izy izao no monina, miaraka amin'ny ankohonany — ary mpitsoaponenana roa hafa nampiantranoiny. Sary: Isabel Vázquez/NextGenRadio
Ny 8 May 2017 ity tantara nosoratan'i Isabel Vázquez  ity no nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org . Naverina navoaka etoana ho ampahany amin'ny fiarahamiasa misy amin'ny PRI sy ny Global Voices.
Misy taratasy mipetraka eo ambony latabatry ny efitrano fisakafoanan'i Yulina Bilombele, izay tsy hainy vakiana.
“Ny toriana dia tsy nahavita nandoa ny hofantrano no sady tsy nahavita niala ny trano sy namerina ny toerana.”
Bilombele dia mpitsoaponenana avy any amin'ny Repoblika Demaokratikan'i Kôngô. 80 taona izy ary tsy mahay teny Anglisy. Efa osa tsy afaka miasa ary tsy manana vola handoavana hofantrano.
Araka izany, tany amin'ny rangahy iray izay antsoin'ny ankamaroan'ireo Kôngôley mpitsoaponenana ao Seattle hoe : Floribert Mubalama izy no niantoraka.
“Maniry ny hanampianay azy izy rehetra”, hoy izy. “Misy fotoana tsy maintsy vonjen'izy ireo. Mila mandray fitaterana ry zareo. Tsy maintsy mamonjy ny asany voalohany.” Na, toy ity tranga ity, mila mamaky taratasy fandroahana.
Mubalama, 36 taona, dia nanao izany asa isany ho toy ny iraka tontosainy mba hanampiany ireo Kôngôley mpitsoaponenana mpiray tanindrazana aminy ho tafiditra ao anaty fiarahamonina, indrindra fa ny fampifandraisna azy ireny amin'ny fanomezana toeramponenana fototra sy takabidy, izay sàkana goavana amin'ny fanombohana fiainambavoavao ao Seattle, Etazonia.
Ry zareo Kôngôley no vondrona mpitsoaponenana lehibe indrindra tonga any Etazonia tamin'ny taona lasa, araka ny angondrakitra avy amin'ny Departemantam-panjakana Amerikana navondron'ny Refugee Processing Center.  Teo amin'ny 16.000 tamin'ny taom-panisàna lasa. Ireo Kôngôley manakaiky ny 300 izay tonga tao amin'ny faritr'i Seattle tato anatin'ny dimy taona farany dia nahita ny tenany tsy nisy mpijery tao anatin'ireo olan'ny fampiantranoana tao amin'ny faritra.
Mbola voatahirin'i Mubalama hatrany ao amin'ny efitranony fandraisana vahiny ilay boky maitso voarainy nandritry ny fitarihandàlana nomena azy fony tany an-toby. Nosokafany teo amin'ny pejy iray izay mamaritra ny tetiandron'ny fanomezana toerana ao Etazonia.
“Ny vanimpotoana andrasana ary araka ity boky ity dia taona roa hatramin'ny dimy,” hoy izy mamaky. Izany raha ny fahitàna azy no halavan'ny fotoana tsy maintsy ilain'ireo mpitsoaponenana hidirana tanteraka ho ao anatin'ny fiainambaovaon-dry zareo, miaraka aminà asa marintoerana sy trano fonenana.
Fa tsy izany no zavamisy.
Mahazo fanohanana ara-bola avy amin'ireo masoivoho miandraikitra ny fanomezana toeram-ponenana, ary mahasahana ny hofantranony mandritry ny 90 andro ireo mpitsoaponenana tonga ao Etazonia. Aorian'izay, dia mizaka ny tenany izy ireo amin'ny fandoavany ny hofantrano, saingy milaza i Mubalama fa tsy ampy io fotoana io, ho an'ny vondrom-piarahamonin'ireo Kôngôley misy azy, mba hanànana fizakantena.
Tamin'ny 2014 i Mubalama no tonga tao Etazonia taorian'ny niainany valo taona tao aminà toby iray tao Malawi nametrahana ireo mpitsoaponenana. Tany izy no nahita ny vadiny, sy natao raharaha ary nanorina ny ankohonany.
Tamin'ny voalohany, napetraka tao amin'ny efitrano iray nisy fandriana tokana izy, niaraka tamin'ny vadiny efa nitondra vohoka, zaza roa ary ny rahalahiny, tao Tukwila, tokony ho 16 km any atsimon'i afovoan-tanànan'i Seattle. Niaraka tamin'ny fanampian'ireo mpiasa sosialy, vitan'i Mubalama sy ny vadiny ny namarana ny fifanarahana nataon-dry zareo efa an-taona maro ary nandeha nifindra tamina trano iray misy fandriana telo tany akaikin'i SeaTac, izay onenan-dry zareo ankehitriny. Tsy mora io dingana io, hoy izy, ho an'ireo Kôngôley mpitsoaponenana.
“Tena mampisalasala ny tompontrano ny hampanofa ireo mpitsoaponenana,” hoy i Mubalama. “Tsy fantatr'izy ireo hoe avy aiza ianao.”
Vao mainka mampananosarotra ny fahitàna sy fitazonana trano maharitra ho an'ireo mpitsoaponenana ireo fanamby hafa toy ny teny ifampiresahana, ny tsy fahampian'ny tantara tsara sy ireo hotakotaky ny lasa.
Araka izany, natombok'i Mubalama ny Tambajotra Ho Fampidirana ireo Kôngôley ho anaty fiarahamonina, fikambanana iray izay mampifandray ireo mpitsoaponenana avy any amin'ny Repoblika Demaokratikan'i Kôngô amin'ireo loharanon-karena sy ny vahoaka izay afaka manampy azy amin'ny fipetrahany. Tetikasam-pitiavana tsy aloa vola io ho azy.
“Tsy raisiko ho toy ny asa ilay izy,” hoy izy. “Misy domberina io. Nandritra ireo fotoana rehetra nonenako tany amin'ny toby fametrahana mpitsoaponenana, fiantran'ny olona no niainako.”
Làlana 10 minitra monja miala avy ao amin'ny tranon'i Mubalama ny tranobe iray midadasika misy efitra maro nofidian'ireo Kôngôley marobe mpitsoaponenana ho toerana hiainana: ireo Efitrano Buena Casa ao Kent.
Lazain'i Mubalama fa amin'ny ankapobeny ireo trano misy efitrano maro ireo dia manana toerana iray takatry ny fahefamividin'ireo mpitsoaponenana, safidy iray mora kokoa noho ny any amin'ireo trano amin'ny faritra maro ao Seattle. Kanefa, amin'ny 1 Jona, ny hofantrano dia hiakatra, miainga amin'ny $25 ka hatramin'ny $200, miankina amin'ny haben'ilay toerana. Fisondrotana iray io izay tsy ho voasehak'ireo efa mitolona mafy vao mahavita mandoa ny isambolana.
Gurmeet Singh dia mpiara-miombona antoka amin'ireo trano ao Buena Casa. Ambarany fa ny fanondrotana hofantrano no hany fomba ahafahany manefa ny hetra ambony be alaina amin'ny trano mihofa, izay tafakatra ho $390,000 tamin'ity taona ity. Fony izy nividy ilay toeram-ponenana tamin'ny 2009, nolazainy fa nanodidina ny $200,000 teo ny hetra fandoany. Ho $850 ny hofan'ny trano misy fandriana iray, ary $1,300 ny misy fandriana roa amin'ireny trano misy efitra maro ireny.
“Tamin'ny 1981 ny ray aman-dreniko no nifindra nankaty Etazonia, araka izany fantatro tsara ny fahasahiranana diavin-dry zareo ireo,” hoy i Singh. “Raha tsy nisondrotra ny fandanianay, mety tsy nanao izao izahay.”
Tsy tranga maningana ny an'ireo trano misy efitra maro ao Kent.
Any amin'ny faritra an-tanandehibe be mponina, miakatra 6,7 isanjato isantaona ny hofantrano, araka ny tatitra Zillow  vao tsy ela akory izay. Raha ampitahaina, ireo faritra hafa misy hofantrano malady misondrotra, toa an'i Los Angeles sy Sacramento dia mahita fisondrotana eo amin'ny 4,7 isanjato eo isantaona raha be indrindra. Hila fanondrotana misimisy kokoa ireo mpampanofa trano ao Seattle ho an'ny vola miditra amin'izy ireo, raha mitaha amin'ireo mpampanofa any amin'ny faritra an-tanandehibe be mponina ao Etazonia, mba ho tafavoaka velona.
Ho an'ireo mpitsoaponenana, mametraka fanamby fanampiny io ho fanombohan-dry zareo fiainana vaovao — iray izay ho atrehan'ny Departemantam-panjakana ao Washington misahana ny tolotra Sosialy sy Fahasalamana amin'ity volana ity ao amin'ny Zaikaben'nhy Fampiantranoana ireo Mpitsoaponenana ao King County  amin'ny 24 May. Isan'ireo fikambanana marobe misahana mpifindramonina ho avy handray anjara amin'ny fifanakalozankevitra ny Tambajotra Ho Fampidirana ireo Kôngôley ho anaty fiarahamonina.
Fa hatreto aloha, mampanahy an'i Floribert Mubalama ny momba ilay taratasy fandroahana an'i Yulina Bilombele.
Yulina Bilombele, 80 taona, manangona ny taratasy fandroahana azy sy ireo tapakila nandoavany hofantrano mba ho adikan'i Floribert Mubalama satria tsy mahay teny anglisy izy. Samy mpitsoaponenana avy any amin'ny Repoblika Demaokratikan'i Kôngô ny roa tonta, monina ao amin'ny faritry ny metro ao Seattle. Sary: Isabel Vázquez/NextGenRadio
Tsy nahavita nahita trano marintoerana i Bilombele fony izy tonga tao Etazonia, taona roa lasa izao. Niaraka nipetraka tamin'i Mubalama izy nandritry ny andro vitsivitsy ary avy eo lasa tany amin'ny toeram-pialofana ho an'ireo tsy manan-trano. Farany, nifindra nankany aminà fianakaviana iray any amin'ireo trano ao Buena Casa izy, saingy niala tao tamin'ny fiandohan'ity volana ity izy ireo. Ankehitriny, irery ao anatin'ilay toerana kely, i Bilombele no tsy maintsy mandoa manontolo ny hofantrano na raha tsy izany dia miverina ho tsy manan-kialofana indray.
“Ny tahotro dia ity izaho tsy manana hery sahaza intsony noho ny taonako,” hoy ny tenin'i Bilombele nadikan'i Mubalama. “Tsy ananako ny vola takian-dry zareo.”
Lazain'i Mubalama fa mampihemotra ireo mpifindra monina vaovao izay nanana fanantenana avobe hahita fiainambaovao ao Amerika ny tolona atrehana mba hahitàna fialofana sy hitazonana ny trano mandritry ny fotoana maharitra.
“Rehefa tafapetraka izahay, ny zavatra voalohany andrasanay dia ny trano honenana”, hoy izy. “ Izany no zavatra tsy mba azonay. Ny zavatra goavana indrindra andrandrainay no tsy hita: ny trano.”
Tamin'ity indray mitoraka ity, tsy nisy toerana ho an'i Bilombele atao an-tranon'i Mubalama. Efa nampiantrano olona roa hafa mpitsoaponenana tsy manan-kialofana ilay fianakaviana, ka tsy manana toerana intsony.
Fony izy mpiaramiasa tamin'ny NextGenRadio tao Seattle no nitatitra ity tantara ity i Isabel Vázquez. Eto mijery misimisy kokoa amin'ireo tatitra avy amin'ilay fandaharanasa .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/05/16/99873/
 Isabel Vázquez: https://www.pri.org/people/isabel-v-zquez
 Refugee Processing Center.: http://www.wrapsnet.org/admissions-and-arrivals/
 tatitra Zillow: https://www.zillow.com/research/rent-increase-raise-needed-14754/
 Zaikaben'nhy Fampiantranoana ireo Mpitsoaponenana ao King County: https://www.eventbrite.com/e/king-county-refugee-housing-summit-tickets-33221251658?aff=efbneb
 Eto mijery misimisy kokoa amin'ireo tatitra avy amin'ilay fandaharanasa: http://seattle2017.nextgenerationradio.org/